Waxyaabaha kale ee Xayeysiinta |
Ku Takhasusay Noocyada Kala Duwan ee Gacan -qabashada
Gifts Shiny Pretty Shiny oo ku takhasusay dhammaan noocyada kala duwan ee silsiladaha caadooyinka ah oo ay ku jiraan silsiladaha silikoonnada, silsiladaha dharbaaxada silsiladda, silsiladaha jilicsan ee PVC, jijimmada birta ah, silsiladaha dharbaaxada lanyard, wristbands -ka tolmo leh, wristbands -ka tuwaalka, silsiladaha birta ah ee aan birta lahayn, silsiladaha la tuuri karo ee PVC, silica silica ...
Ma waxaad u raadineysaa wax dalacsiin ah ama hadiyado qurux badan gabdhaha ama marwooyinka? Mid ka mid ah hadiyadahayaga xiisaha leh - muraayadaha akril -ka & muraayadaha qurxinta biraha ayaa kuu noqon lahaa ikhtiyaar wanaagsan. Muraayadda jeebka ee qurxoon oo qurxoon waxaa lagu samayn karaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta, zinc al ...
Qalabka Loogu Talagalay Guriga Guriga & Tababarka
Inta lagu jiro waqtiga adag ee muddada COVID-19, maxaan samayn karnaa si aan u badbaadino nafteena & kuwa aan jecel nahay? Marka laga reebo xirashada maaskaro wejiga marka aad baxeyso oo gacmaha si joogto ah u dhaq, jimicsi badan samee oo kor u qaad habka difaaca jirka ayaa noqon doona doorasho kale oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay leeyihiin meel xaddidan iyo qalab jimicsi ...
Xusuus -qorka Maqaarka
Maqaarku waa badeecad dabiici ah oo leh taariikh ka badan kumanaan sano. Maqaarka xusuusta ee maqaarku wuxuu u muuqdaa mid xarrago leh oo aan waligiis ka bixin qaab-dhismeed, sidaa darteed maqaarku waa maaddo ku habboon baahiyaha casriga ah oo aad ugu wanaagsan alaabta hadiyadaha xayeysiinta ee heer-sare ah. Hadiyado qurxoon oo dhalaalaya ayaa bixin kara noocyo kala duwan ...
Hadiyadaha Maalinta Aabaha
Jacaylka Aabbuhu waa mid naxariis badan, daacad ah, is -hoosaysiiya, dulqaad badan, allabari ah oo aan isbeddelin. Si aad wax gaar ah u siiso Maalinta Aabbaha hadiyad ahaan waa mid ka mid ah hababka ugu habboon ee lagu muujiyo sida aad ugu qaddarinayso inuu noloshaada ku jiro. Wax fikrad ah kama qabtid waxa ay aabbayaashu jecel yihiin hadiyado ahaan? Waxaa fiican inaad marka hore ogaato danaheeda, ...
Shaqooyin badan oo Xuub-Pop Pop Pop ah
Ku riix boombalada xumbada pop -ka ayaa si dhakhso leh u qabsada suuqa marka la iibinayo, oo hadda noqday mid ka mid ah isbeddellada baahsan ee 2021. Waa maxay sababta ay caan u tahay? Marka hore, alaabta lagu ciyaaro ee xumbo leh waxaa lagu sameeyaa 100% walxo silikoon oo ammaan ah, dib loo isticmaali karo oo la dhaqi karo. Aan sun ahayn oo aan wax dhibaato ah u geysan dadka ama xayawaanka guriga ah ....